Mizarà rakikira fiaraha-miasa ao amin'ny Google Photos izao | Androidsis
Vao haingana izahay no nanana fotoana nihaonana tamina rindranasa vaovao izay naseho miharihary amin'ny fampiasa amin'ny fanomezana ny mpampiasa ny fahaizana mizara rakikira sary izay misy olona afaka manampy sary vaovao an'ireo nalaina tamin'ny fampakaram-bady na tamin'ny fanaovan-jaza ny zanak'anabavy. App antsoina trano firaketana ary izany dia misy ifandraisany betsaka amin'ny Google Photos lehibe, na dia ny voalohany aza dia mifantoka bebe kokoa amin'ny rakikira, mamela ny ambiny ho an'i Google miaraka amin'ireo algorithma hamantarana ireo singa ao anaty sary na andian-tsarimihetsika tsara izay nahatonga azy io ho tsara indrindra galeriana Sary fampiharana ny fotoana nefa tsy misy olona manatona azy hanolotra azy fifaninanana.
Amin'izao fotoana izao rehefa mandefa rakikira fiaraha-miasa i Google Photos ho fomba haingana sy haingana hanana habaka virtoaly sy an-tserasera hahafahan'ny mpifandray sy namana na fianakaviana rehetra ento amin'ny sary ny fahatsiarovanao rehetra sy horonan-tsary. Fanavaozana izay tonga tamin'ity herinandro ity izay tsy nijanonan'i Google ny fampidirana andian-dahatsoratra toa ny drafitry ny fianakaviana amin'ny Google Play Music, YouTube miaraka amin'ny famantarana buffering amin'ny horonan-tsary niato, ny Fanesorana Nexus 6 ny fivarotanao na ny fampidirana ny fampahatsiahivana ao amin'ny Google Kalandrie. Herinandro lehibe iray izay mitarika antsika mankamin'io sakafo hariva Krismasy io toa ny tian'ny bandy avy any Mountain View hanana fitoniana sy tsy maika.
1 Rakitra fiaraha-miasa ho an'ny rehetra
2 Ahoana no fomba hamoronana rakikira fiaraha-miasa?
2.1 Ny zavatra voalohany dia ny famoronana album
2.2 Mizara an'ity rakitsary sary ity
Rakitra fiaraha-miasa ho an'ny rehetra
Ny rakikira fiaraha-miasa dia mamela ny namana sy ny fianakaviana ampio ny sarinao manokana ary horonan-tsary amin'ny fanangonana anao, izay mahatonga azy ho karazana tantara zaraina ho an'ny rehetra.
Na dia mety mieritreritra aza isika fa tsy maintsy manao dingana sarotra sasany, Google dia nanamora izany, satria ny hany sisa hataonao dia ny misafidy ny sary, mamorona rakipeo ary zarao amin'izay tadiavinay ny rohy. Tsy maninona raha manana takelaka ilay mpampiasa farany izay mandray ity rohy ity, eo amin'ny birao solosain'izy ireo na avy amin'ny finday avo lenta ambanin'ny Android na iOS, na iza na iza dia afaka manampy an'io rakikira zaraina io raha manana ny rohy URL iraisana.
Eto aho dia milaza indray ny toetran'i Google nalaina an'io endri-javatra io avy amin'ny Storehouse izay manome rohy URL hahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ilay rakikira niara-niasa. Hevitra tsara raisiny avy amin'ny olon-kafa mba hanampiana kalitao bebe kokoa amin'ny Google Photos, iray amin'ireo rindranasa alaina indrindra amin'ny taona ary nambara tao amin'ny Google I / O miaraka amin'iny exclusivité izay midika fitehirizana tsy manam-petra raha toa ka feno sary sy horonan-tsary amin'ny HD.
Ahoana no fomba hamoronana rakikira fiaraha-miasa?
Ny zavatra voalohany dia ny famoronana album
Mandeha amin'ny fampiharana Google Photos izahay
Amin'ny ankavanana ambony tsindrio ny bokotra +
Misafidy rakikira izahay
Misafidy ireo sary izahay sy horonan-tsary tianay hampidirina
Tsindrio efa vita
Mizara an'ity rakitsary sary ity
Manokatra ny fampiharana Google Photos indray izahay miaraka amin'ny safidy roa toy ny fizarana sary sy horonan-tsary tsirairay avy, izay tsy maintsy isafidianantsika ny iray, na ny safidy hizarana rakikira, tantara na sarimihetsika, ka tsy maintsy sokafy ireo singa rehetra ireo
Eo amin'ny ilany ankavanana, efa voafantina ny rakikira zaraina, tsindrio ny kisary fizarana amin'ny Android
Azontsika atao izao ny misafidy mandika na mamorona rohy alefa any amin'olona
Avy amin'ny safidy amin'ny famoronana rakikira dia manana ny safidy hamoronana iray nozaraina miaraka amin'izay hamelantsika ny fifandraisana iray hanampy ireo sary na horonan-tsary mitovy amin'ilay fampirimana noforonina.
Alohan'ny hamaranana dia lazao fa misy ireto rakikira niara-niasa ireto manomboka izao amin'ny Android, iOS ary ao amin'ny pejiny web, Ka tsy hanana olana ianao amin'ny fizarana ireo fotoana majika miandry anao mandritra ny andro vitsivitsy izay hihaonanao amin'ny fianakavianao sy ny namanao amin'ny hetsika samihafa toy ny Krismasy amin'ny sakafo hariva amin'ny Noely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Azo alaina ao amin'ny Google Photos ny rakikira iraisana
Elephone M2, fanadihadiana ary ny traikefan'ny mpampiasa